Quick Cima PCB
Imfama / Wangcwatywa Via
Free DFM Hlola
QC For Pcb
QC For Assembly Pcb
Njengoko ukhetho-value added iinkonzo zethu Assembly, sinikezela Free PCB Ifayile Khangela, okwabizwa ngokuba Free DFM, ezizezi ukunceda khangela isiko lakho ibhodi wesekethe ifayile yoyilo imiba kunokwenzeka ukuba ezinokuchaphazela manufacturability. Ukuba nayiphi na imiba zabonwa, siya kunxibelelana ngokukhawuleza ukusombulula kunye umba, ngoko ukuhlela imveliso PCB ngokufanelekileyo.
I-DFM liya kwenziwa ukususela 5 iinkalo: Iitsheki ukuzama, Ukubonisa Iitsheki Layer Oluyingxubevange, khangela Power / Ground, khangela Solder Vuvu, lokhangelo Silkscreen. Funda le mihlathi ilandelayo ukuze zifumane iinkcukacha ezingaphezulu.
1. lokhangelo ukuzama
Intshukumo ukuzama Iitsheki kujongwe ukufumana iziphene manufacturability enokwenzeka xa kombiwa maleko (ngokusebenzisa, wangcwatywa yaye imfama nge ungqameko) kwaye amanani-on ngokumba zikhabane. Kujongwe ukuba zisebenze kuphela ngokumba zikhabane. Isebenzisa drill umaleko, phezulu kwaye izaleko ezantsi kombiwa mfumba zalo naliphi na igunya okanye emhlabeni layer kule mfumba. Olu luhlu lokutshekisha ephambili uboniswa ku Table elilandelayo 1.
2. Ukubonisa lokhangelo Ulwaleko Mixed
Lo msebenzi ujoliswe ukufumana iziphene manufacturability enokubakho ngokwemaleko Signal kwaye izaleko ephikisanayo kunye nokudala ulwazi. Intshukumo ongasebenza kuyo nayiphi umaleko, kodwa ikakhulu ilungiselelwe layers isignali. Isebenzisa umaleko ngokwayo kunye NC (drill okanye umzila) umaleko leyo lihlaba kuyo. Olu luhlu lokutshekisha ephambili uboniswa ku Table elilandelayo 2.
Iitsheki 3. Power / Ground
Le Iitsheki Power / Ground zenzelwe ukuba ukufumana iziphene manufacturability enokuba ngamandla, emhlabeni kwaye izaleko exutyiweyo. Lisebenzisa ubuchule ezahlukeneyo ngoxilongo amandla nesiseko maleko ezimbi nezilungileyo. Olu luhlu lokutshekisha ephambili uboniswa ku Table elandelayo 3.
5. Iitshekhi Silkscreen
Lo msebenzi ujoliswe ukufumana iziphene yokuvelisa amathuba ngokwemaleko silkscreen kwaye amanani-. Itshekhi isebenza kuphela ngongqameko isilika screen kuba lixhomekeke matrix umsebenzi ukufumana yobhedu yangaphandle, solder imaski eyayo maleko enxulumene apho ukujonga. Olu luhlu lokutshekisha ephambili kubonakaliswa kwiTheyibhile elilandelayo 5.
Ufuna uthathe inzuzo yethu ukhetho Free DFM? Qala ekuthumeleni i isicelo quote ngenxa yesiko PCB Assembly iprojekthi yakho wonderful@wonderfulpcb.com Qinisekisa ukuba ziquka PCB yakho ifayile yoyilo, bom kunye nezinye iimfuno ezithile. Abameli yethu iya khangela kwifayile yakho aze akunike locaphulo yesiko zingadlulanga iintsuku 1-2 zomsebenzi.
Idilesi: NO.6A, Building FengYeDaSha, NanShanRoad | NanShan